Home > Ngwaahịa > Mpempe akwụkwọ Tinplate > Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ Electrolytic
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ Electrolytic Ndị nrụpụta
Qingdao Sino Witop Steel Co., LTD bụ otu n'ime ndị nrụpụta tinplate ETP kachasị ukwuu na China. Anyị na -etinye aka na mmepụta na nnukwu akwụkwọ nke ETP Electrolytic Tinplate Sheet.
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ elektrọnik nwere ezigbo ikuku, nchekwa, nchekwa ọkụ, nkwụsi ike na ịchọ mma ọla pụrụ iche. Yabụ a na -ejikarị ya na ụlọ ọrụ akpa nkwakọ ngwaahịa yana ọ bụ ihe nkwakọ ngwaahịa ụwa niile.
Dịka ụkpụrụ njikwa gburugburu ebe obibi nke ISO-14000 si dị, ngwaahịa Electrolytic Tinplate Sheet bụ mmetọ dị ala, enwere ike imegharị ya na ịchekwa akụ. N'ọdịnihu, ngwa nkwakọ ngwaahịa tinplate ga -enwe mmepe sara mbara.
A na-akpọkwa T3 T4 SPTE Electrolytic Tinplate Sheet for Cans dị ka tin plate iron, tin-plated thin steel, na ndebiri Bekee bụ SPTE na ETP. Tinplate na-ezo aka na obere nchara carbon dị larịị ma ọ bụ warara nchara nke nwere mkpuchi tin dị ọcha n'akụkụ abụọ. Mpempe akwụkwọ T3 T4 SPTE Electrolytic Tinplate maka Cans nwere ike na nhazi nke nchara, nweekwa nguzogide nchara, ike ịgbanye gbamgbam na ọmarịcha ọmarịcha tin.
A na-akpọkwa SPCC Mr GradeTin Coating Electrolytic Tinplate Sheet dị ka igwe efere efere efere, nchara dị nchara, na ndebiri Bekee bụ SPTE na ETP. Tinplate na-ezo aka na obere nchara carbon dị larịị ma ọ bụ warara nchara nke nwere mkpuchi tin dị ọcha n'akụkụ abụọ. SPCC Mr GradeTin Coating Electrolytic Tinplate Sheet nwere ike na ụdị nke nchara, nweekwa nguzogide corrosion, ikike ịgbanye gbamgbam na ọmarịcha ọdịdị tin.
Enwere ike ịhazi Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ Electrolytic emere na China na ọnụ ala ma ọ bụ ọnụ ala. Ngwaahịa anyị bụ SGS na BV gbaara ezi àmà. Na mgbakwunye, ngwaahịa anyị na -adigide ma anyị na -enyekwa akwụkwọ ikike afọ 10. Witop Steel bụ ndị nrụpụta na ndị na -ebubata ngwaahịa na China na ndị ama ama Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ Electrolytic. E wezụga, anyị na -akwadokwa nnukwu nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na m nye iwu ugbu a, ị nwere ya na ngwaahịa? n'ezie! Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga -enye ọ bụghị naanị nlele efu kamakwa ndepụta ọnụahịa na nkwupụta. Ọ bụrụ na m chọrọ ịre ahịa, ọnụ ahịa ole ka ị ga -enye m? Ọ bụrụ na nnukwu ọnụ ahịa gị buru ibu, anyị nwere ike ịnye ọnụahịa ụlọ ọrụ. A nabatara gị ka ị bịa ụlọ ọrụ anyị ịzụta ihe ọhụrụ, ego mbelata na ogo dị elu Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ Electrolytic. Ị nwere ike ijide n'aka na ịzụta ngwaahịa mbelata n'aka anyị. Anyị na -atụ anya ka gị na gị rụkọọ ọrụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ugbu a, anyị ga -aza gị n'oge!